डाक्टर भगवान कोइरालाले दिएको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य टिप्स
लाइट नेपाल वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी बिरामीको मुटु बचाइसकेका छन्। आफैँ डाक्टर भएर के गर्नु, जोखिम त स्वयम् उनको मुटुलाई पनि छ। डा. कोइरालालाई राम्रोसँग थाहा छ, अरुको मुटु बचाउनका लागि आफ्नो मुटु सुरक्षित हुनैपर्छ। त्यसैले उनी आफ्नो जीवनशैली र खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छन्। मुटुका यी चर्चित डाक्टरले आफ्नो मुटुचाहिँ कसरी बचाइरहेका छन् त ? उनकै मुखबाट सुन्नुहोस्।